आमा बन्दाको पीडा « Loktantrapost
२० श्रावण २०७५, आईतवार ११:१९
अस्पताल ! अस्पतालमै हुने गर्छन् जीवनका ठुला–ठुला दुर्घटना र खुसीयाली ल्याउने चमत्कारिक घटनाहरु पनि । अस्पतालबाटै कतिले माया मारिसकेको जीवन बाँच्ने अवसर पाएका हुन्छन् भने कतिले जीवन बाँच्ने अवसर सकिएको कुरा थाहा पाउँछन् अस्पतालबाटै । त्यसैले सुख र दुःखको बराबर हिसाब बाँड्ने ठाउँ हो अस्पताल ।
यस्तै जीवनको सुख र दुःखको बराबरी हिसाब बोकेर डिस्चार्ज हुँदै गरेकी हरमती राजवंशीसँग भेट भयो मेरो । २०७५ सालको श्रावण १३ गते म ओम साई पाथिभरा हस्पिटलको गाइनो वार्डको १० नंं बेडमा पुग्दा हरमती आफू घर फर्किने तयारीमा लागिरहेकी थिइन् । उनको बारेमा थोरैतिनो जानकारी थाहा पाएपछि थप जानकारी उनैबाट सुन्न मन लाग्यो ।
लगभग आधा घण्टा बसेर कुराकानी गरेँ हरमतीसँग । छेउमा उनका कुरुवा श्रीमान र बहिनी थिए । ९ दिनपछि घरजान पाउँदा प्रफुल्ल भएकी हरमतीको दुःखसँग म पनि एकछिनका लागि एकाकार भएँ ।
पाथिभरा हस्पिटलको यही वेडमा ९ दिन अगाडि आउँदा हरमतीलाई अब यसरी बाँचेर कसैसँग बोल्न गफ गर्न पाउँछु जस्तो लागेकै थिएन । सहनै नसक्ने गरी पेट दुखिरहँदा अब जीवन यति नै रहेछ भन्ने लागेको थियो हरमतीलाई । वास्तवमा उनको अवस्था नै खतरापूर्ण थियो । ‘अवस्था धेरै जटिल थियो, तर पनि हामीलाई विश्वास गरी उपचार गर्ने अवसर दिनुभए हामी यहीँबाट पनि उपचार गर्न सक्छौँ भन्नेथ्यो । त्यस्तै भयो । उहाँको उपचार यहीँबाट गर्ने अनुमति पायौँ र हामी लागि परेर उहाँलाई बचायौंँ,’ भन्छन् पाथिभरा हस्पिटलका कन्सलटेन्ट सर्जन डा.शशी सिंह ।
हरमती पहिला नै दुईवटा सन्तानकी आमा भइसके पनि आज एक सन्तान मात्रै छन् उनको साथमा, अर्को सन्तान खेर गएको रहेछ । यो तेस्रोपटक बच्चा जन्माउने योजनामा रहेकी हरमतीका पेटमा यो पटक भने एक, दुई मात्र होइन, तीनवटा बच्चा रहेछन् । दुईपटक अपरेसनबाट बच्चा जन्माइसकेकी हरमतीले तेस्रो पटक पनि बच्चा जन्माउन खोज्दा तिम्ल्याहा बच्चा पेटमा भएका कारण यो समस्या आइपरेको रहेछ । ओमसाई पाथिभरा हस्पिटलकी कन्सल्टेन्ट गाइनेकोलोजिस्ट सुमन सिंह भन्छिन्, ‘धेरै जटिल अवस्था थियो, दुईवटा बच्चा पहिला पनि अपरेसनबाटै भइसकेको रहेछ, हामीले दुईवटा बच्चा अपरेसनबाट भएपछि अर्को बच्चा नजन्माउने सल्लाह दिने कारण यस्तै हुन्, फेरि पेसेन्टको पेटमा एक दुई हैन, तीन तीनवटा बच्चा थिए । त्यही भएर उहाँको पाठेघरको माथिल्लो भाग सबै फुटेछ, पेटमै बच्चा मरिसकेका थिए, पाठेघरमै बच्चा मरेको ४८ घण्टा भइसकेको थियो, इन्फेक्सन हुन सुरु भैसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा आमाको ज्यान पनि खतरामा हुन्थ्यो । हामीले पाठेघर सहित पेटका तिनवटै मृत बच्चालाई निकालेर आमाको ज्यान बचाउन सफल भयौँ ।’
आमाको ज्यान बचाउन सफल भएकोमा डाक्टर सुमन सिंह खुसी थिइन् भने बिरामी हरमती पनि आफ्ना पेटका ३ वटै सन्तान जन्माउन नसकेकोमा दुखी थिइन् । तर, बच्चा जन्माउने क्रममा मृत्युको मुखमा पुगेको जीवनलाई बचाएर पुनर्जीवन दिएकोमा पाथिभरा हस्पिटलप्रति खुसी थिइन् हरमती ।
जीवन र मृत्युको दोसाँधमा पुगेकी हरमतीको उपचार गर्ने जिम्मा लिए पनि डाक्टरहरुलाई यो कार्य चुनौतिपूर्ण थियो । तत्काल अपरेसन गर्नुपर्ने थियो । तर, उनको स्वास्थ्य धेरै नाजुक भएकाले तत्काल अपरेसन गर्ने अवस्था पनि थिएन । पाथिभरा हस्पिटलका कन्सलटेन्ट सर्जन डा.शशी सिंह भन्छन्, ‘अपरेसन गरेर पेटभित्र मरिसकेका ३ वटा बच्चा निकाल्नु पर्ने थियो । तर, उनको हेमोग्लोविन घटेर ३ पोइन्ट पुगेको थियो, प्रेसर पुरै लो थियो र रगत पनि थिएन, त्यसैले ३ दिनसम्म उनलाई आइसीयुमा राखेर ४ पोइन्ट रगत दिई हेमोग्लोविन ७ पोइन्ट भएपछि प्रेसर पनि सामान्य हुँदै गएपछि मात्रै ३ दिन पछि अप्रेसन गर्न सफल भयौँ, बच्चा पहिला नै मरिसकेका थिए, आमाको जीवन पनि खतरामा थियो, अपरेसन गरेर खतरामुक्त बनाउन सक्यौँ, उनलाई जीवन दिन सक्यौँ ।’
आफ्नो पाठेघरमा जम्मा पाँच सन्तानले भरिए पनि अब हरमतीको सन्तान एक मात्र छिन् । यस संसारमा अब अरु सन्तान चाहेर पनि जन्माउन सक्दिनन् हरमतीले । यस्तो अवस्थामा आफूप्रति आफ्नो लोग्ने र परिवार वर्तमान अवस्थामा आफ्नै हेरविचार र स्याहारमा लागे पनि भविष्यप्रति भने उनी सशंकित छिन् । बच्चा जन्माउने सन्दर्भमा कट्टर पुरातनवादी सोच राख्ने नेपाली समाज त्यसमा पनि राजवंशी समुदाय, अझ अशिक्षा र अभावले ग्रस्त हरमती राजवंशीको जस्तो परिवारले कहाँ डाक्टरले दिएको चुनौती स्वीकार्ला ? त्यही स्वीकार नगर्दाको प्रतिफल थियो, हरमतीको जीवन मृत्युको मुखमा पुग्नु पनि ।
लामो समयदेखि झापाको सदरमुकाममा ओमसाई पाथिभरा हस्पिटल खोलेर निरन्तर बिरामीहरु सेवा प्रदान गरिरहेका हस्पिटलका निर्देशक बालकृष्ण पोखरेलसम्म पुगेँ म । हरमतीको विषयको कुराकानीकै क्रममा उनले भने, ‘अहिले झापा जिल्लाको सदरमुकाम गाउँ जस्तै भइसकेको छ । यहाँ आउने राम्रो बाटो छैन । मेची राजमार्गको अस्तव्यस्त अवस्थाका कारण टाढाका मान्छेलाई यहाँसम्म उपचार गर्न आउनका लागि कठिन छ । तैपनि अप्ठ्यारो बाटो नभनी टाढा र नजिक जहाँसुकैबाट आए पनि हामीले उपचार गरेर, स्वस्थ बनाएर र स्वस्थ हुने बाटो देखाएर पठाउने गरेका छौँ । यहाँ आएका बिरामीहरुको सेवा सुविधाकै लागि हामीले जटिलभन्दा जटिल रोगको उपचार गर्न सकौँ भनेर नयाँ नयाँ प्रविधि, स्रोत साधन ल्याएका छौँ र दक्ष अनि सक्षम डाक्टर राखेर काम गरिररहेका छौँ । जसको परिणाम हरमती जस्ता मृत्युको मुखमा पुगेकाहरुको जीवन रक्षा गर्न सकिरहेका छौँ ।’
यसरी काम विशेषले हस्पिटलमा पुगेको बेला भेटिएकी हरमती राजवंशीलाई भेटेपछि उनी जस्तै कैयौँ महिलाहरुले आमा बन्ने सिलसिलामा जीवन गुमाएका छन्, कतिका पाठेघर फ्याँकिएका छन् । यदि समयमा उपचार हुन सकेको भए ती महिलाहरु पनि बाँच्ने थिए, स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने थिए । अब अनाहकमा जीवन गुमाउनु नपरोस् । अस्पताल नभएका कारण तथा समयमा अस्पताल नपुगेका कारण हरमतीले जस्तै स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका आम महिलाले स्वस्थ जीवन प्राप्त गरुन् ।